के तपाई याै’न इच्छा बढाउन चाहानु हुन्छ ? खानुहाेस् यी खाने कुरा::देश र जनताप्रति समर्पित
के तपाई याै’न इच्छा बढाउन चाहानु हुन्छ ? खानुहाेस् यी खाने कुरा
१. गोलभेंडा :
गोलभेंडालाई रातो रंगमा बदल्ने लाइकोपिन नामक तत्वले मानिसमा यौ’नइच्छा बढाउन सहोग गर्दछ । यसले पुरुषमा प्रोस्टेट क्यान्सरको खतराबाट पनि जोगाउँछ ।
पालुङगोको साग नियमित सेवन गर्नाले यौ’नक्षमतामा बृद्धि ल्याउनुका साथै यौ’नाङ्गमा रक्तप्रबाह समेत बढाइदिन्छ ।
३. भिन्डी :
भिन्डीमा बिभिन्न किसिमका भिटामिन तथा जिंकतत्वहरु पाइन्छ जसको नियमित सेवनले सम्भोग सम्बन्धी समस्या हटाउँछ र यौ’नक्षमतामा बृद्धि ल्याउँछ ।
प्याज स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी हुन्छ । यसको सेवनले यौ’नाङ्गको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुका साथै यौ’न इच्छा प्रबद्धन गर्न सहयोग गर्छ ।
यसमा पाइने पौष्टिक तत्वले यौ’न क्षमतामा बृद्धि ल्याउनुका साथै समग्र स्वास्थ्यमा लागि लाभदायी हुन्छ ।
६. लसुन :
लसुनमा कमोत्तेजक गुण हुन्छ जसले शरीरको रक्तप्रवाहलाई राम्रो बनाउँछ र रक्तनलीलाई संकुचन प्रवाह रोक्छ ।
७. गाजर :
गाजरमा भिटामिन ए प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ जसले पुरुषमा शुक्रकिट बनाउन सहयोग गर्छ । यसको नियमित सेवनले पुरुषलाई बढी कामुक तथा आकर्षक देखाउन मद्दत गर्छ ।
८. गान्टेमूला :
यसमा प्रशस्त मात्रामा नाइटेट नामक तत्व हुन्छ जसले यो’नाङ्गमा रक्तप्रवाह बढाइदिन्छ र यौ’नक्षमतामा बुद्धि ल्याउँछ । यसको सेवनले हर्मोन सन्तुलनमा सहयोग ल्याउनुका साथै यौ’न स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ ।
यसका अलावा खानानमा बिशेष ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ । बढी मात्रामा अमिलो,, चिल्लो, पिरो, मसालेदार खानाको सेवन कम गर्नु राम्रो हुन्छ ।
कसरी आनन्दमय बनाउन सकिन्छ ? याै*न सुखका लागि यस्ता तरिका अपनाउनुस्
कस्ताे समयमा याै*न सम्बन्ध राख्नु हुदैन ?
के फेसबुकमा साथी बन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहाेस् सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकले एकातिर मित्रता, सम्बन्धको नयाँ संसार प्रदान गरेको छ भने अर्कोतिर यही फेसबुकको माध्यमबाट ठगी, लुट र यौन शोषण पनि हुँदै आएको...